KALA DUWANAANSHAHA BARADHADA ZEKURA: SHARAXAAD FAAHFAAHSAN, XAALADAHA SII KORDHAYA IYO SAWIRRADA - BEER CAGAARAN
Zekura kala duwan ee jarmalka kala duwan ee Russia
Inta badan, in raadinta dalagga weyn, bannaanka u ah iyo bannaanka u iloobo dhadhanka baradho. Laakiin dalagga this rooti ma aha wax loogu yeedho kibis labaad, iyada oo aan, waxaa adag in la qiyaaso miis ka waddan kasta oo dunida ah.
Sidaa darteed, baradhada calafka, taas oo, waxay siinaysaa wax soo saarka, ma beddeli doonaan noocyada miiska ee dhadhan. Iskuduwaha guusha ee jilayaasha si ay isugu keenaan dhalidda wanaagsan leh dhadhanka wanaagsan waxay ahayd darajada Zekura.
Waxaad ka heli doontaa sharraxaad faahfaahsan, sifooyinka iyo astaamaha tiknoolajiyada beeraha ee qodobkan. Iyadoo sidoo kale sida ay u shaqeynayaan iyo iska caabinta cudurrada, u nugulaanta weerarka cayayaanka cayayaanka.
Kalluunka ka soo jeeda Jarmalka si loo helo dulqaadka xididka, iska caabinta cudurrada, muddada gaaban ee Bisaylkiisa, dhadhan fiican ee khudradda. Muhiim u ah iyaga ayaa ahaa nolol shelf. Zekura ayaa xaqiijiyay in ay suurtagal tahay hadda Kala duwanaanshahan waxaa loo yaqaan dadka deggan xagaaga iyo beerta ee dhammaan Russia, si guul leh kor ugu kaco xitaa xaaladaha xagaaga ee Siberian gaabanbixinta wax-soosaarka cajiibka ah.
Barafka Zekura: sharaxaad kala duwan iyo sawirro
Magaca dugsiga Zekura
Sifooyinka guud kala duwan ee miiska leh dhadhanka fiican iyo dhalidda deggan
Wakhtiga uurka 80-95 maalmood
Mawduucyada Starching 13-18%
Dad badan oo digriiga ganacsiga ah 60-150 g
Tirada digriiga duurka 17-20
Yield 450-550 c / ha
Tayada macaamilka dhadhan weyn, fayaqab dhexdhexaad ah
Soo kabashada 98%
Midabka maqaarka Jaale
Midab daruuf iftiin huruud ah
Gobollada la doorbido Volgo-Vyatka, Central Black Earth, North Caucasus, Volga Dhexe, Galbeed Siberian, Far Eastern
Cadaadiska cudurada waxay u adkeysi kartaa qolofka
Noocyada sii kordhaya u adkaysata abaarta, laakiin waxay si fiican uga jawaabtaa waraabinta dheeri ah
Baradhada kala duwan ee noocaan ah waxay caan ku noqotay cilaaqaad la'aanta iyo farsamooyinka beeraha ee sahlan. Kalluunka caleenta qulqulaya kuma fido, taas oo sahlaysa dhirta iyo dabacsanaanta. Ubax waa guduud. Buulkuna waa mid isdhaafsan, waxaa la sameeyaa meel u dhow dusha sare, taas oo fududeynaysa goosashada.
Digriiga waa xitaa, indho indheyn, indho yar, maqaarka iyo maqaarka. Miisaanka digriiga wuxuu gaari karaa 60-150 garaam, buulka dabiiciga ah waxaa jira 17-20 gogo '. Baradhadu waxay sare ugu kacdaa istaarijka, waxay mudo dheer u haysaa muuqaalka suuqyada.
Dhadhaminta baradho badanaa waxay ku xiran tahay xaddiga istaarijirta ee digriiga. Jadwalka hoose waxaad ku arki kartaa waxa tilmaamahan loogu talagalay noocyo kala duwan:
Magaca dugsiga Mawduucyada Starching
Svitanok Kiev 18-19%
Lilac fog 14-17%
Zekura wuxuu u adkeysanayaa nematode dahab, kansar, dabaylo goor dambe ah, iska caabin xoog leh oo ku yimaada qolof, cirridka, caleenka. Maxaa ka dhigaya noocyada kala duwan ee soo jiidashada waa tan inta lagu jiro kaydinta, ma luminayaan dhadhankiisa fiican 3-4 bilood. Waxa ugu muhiimsan waa in la doorto meel jiilaal oo xasuuso taariikhaha.
Sawirro sawir ah ee baradhada Zekura:
Faa'iidooyinka iyo noocyada qasaaraha:
Saliid baradhada huruudka ah ayaa ku habboon in la jeexjeexo, la shiilo, la mariyo maraqa, maraqa, la kariyey saladh. Maskaxda ku hay in ay fududahay inaad karkariso.
In kasta oo aan qabyo ahayn, xaaladaha abaarta ama kulayl la'aanta, digriiga ayaa laga yaabaa in yar yar intii la filayay, laga bilaabo 50 illaa 70 garaam.
Bataatada weyn ee kaydka ah ee noocyada kala duwan ee dukaamada khudradda leh heerkul deggan oo ah 1 - 2 digrii, qoyaan dhexdhexaad ah.
Boqolkiiba aad u hooseeya dalagyada xad dhaafka ah ama aad u yar, oo ku dhawaad ​​dhammaantood siman, iyada oo aan lahayn lakab iyo sharaf, digriiga cagaaran sidoo kale waligiis ma dhicin.
Waa hagaagayaa guryaha kala duwan ee dhowr sano.
Xaaladaha sii kordhaya
Waxaa fiican in la beero baradho Zekura ee bartamaha May, marka ciidda waa diirin ku filan. Kala duwanaantan waxay muujinaysaa natiijooyinka ugu wanaagsan marka lagu dhex beeray ciidda, halkaasoo ah geedo dufan ah, iniin khardal ah iyo lupin ayaa hore loo beeray.
Diyaarinta ciidda hordhaca ah ee qasabka ah:
Daaridda waxaa lagu fuliyaa dhulka banaan, si qoto dheer ah 10 sentimitir;
Masaafada u dhexaysa abuurka - illaa 50 cm;
Qalabaynta abuurka lama doonayo;
Iyada oo ku xiran xaaladda xayawaanka, waxaa lagu dhisi karaa walxaha dabiiciga ah ama macdanta (humus, digada, sapropel, ash alwaax, peat, sida balka).
Kala duwanaanshaha Zekura waxaa lagula talinayaa beerista bartamihii Ruushka, laakiin xitaa Siberia iyo Kazakhstan waxay gaadhay farsamo farsamo by bartamihii August, 90 illaa 100 maalmood laga bilaabo wakhtiga beerto.
Zekura sidoo kale uma baahna daryeel gaar ah.. Kuwa ugu muhiimsani waa waqtigooda qallajinta iyo dabacsanaanta ka dib marka la waraabiyo ama roobabku. Boogaha ayaa laga saaraa Juun, ka dibna - sida loo baahdo. Bilowga Luulyo waxaa habboon in la daboolo duurka ee baradho, kaas oo u oggolaan doona in qoyaanku sii dheeraado oo uu ka caawin doono samaynta buulkeedii iswada leh. Isku duub ilaa bartamihii Agoosto ilaa bartamihii Sebtembar.
Waxaa jira siyaabo badan oo lagu baraarujiyo baradhada. Maqaalkeena waxaad ka heli doontaa macluumaad xiiso leh oo ku saabsan teknoolajiyada Holland, oo ku saabsan sii kordhaya foostooyinka ama bacaha.
Kala duwanaanta noocaan ah, oo leh taxadar habboon, waxay ku siisaa 450-550 oo xarig hektar ah, taas oo ah, ilaa 45 kiiloogar halkii hektar xilliga xagaaga.
Si loo barbar dhigo dhalidda iyo ilaalinta tayada kala duwan ee dadka kale, waxaad isticmaali kartaa jadwalka hoose:
Magaca dugsiga Yield (kg / ha) Xasiloonida (%)
Zekura 450-550 98
League 210-360 93
Mozart 200-330 92
Queen Anne 390-460 92
Marka ay sii kordheyso baradhada, kiimikooyinka dheeraadka ah waxaa badanaa loo isticmaalaa si loo hagaajiyo wax soo saarka ama cayayaanka.
Akhri dhammaan wixii ku saabsan faa'iidooyinka iyo halista ah fungicides, herbicides iyo cayayaanka ee articles in waxtar leh on our site.
Si loo ilaaliyo dalagyada beeraha koray, waxaa lagama maarmaan ah in horay loo nadiifiyo vault ama maqaasiinka oo qalajiyo. Boorashka, ka saarida dhammaan xididdada leh calaamadaha cudur, waxyeelo, qalalan, nadiif ah dhulka.
Waxaa haboon in la geliyo sanduuqyada alwaaxda ah ama weelasha, laakiin sidoo kale waxaa ku habboon shabakadaha kaydka gaarka ah. Heerkulka kaydinta waa in lagu hayaa heerka 1 - 2 digrii, kaas oo kaa caawin doona inaad sii wadato baradhada waqti dheer. Qolku waa inuu noqdaa madow, waxay ka caawisaa ka hortagga biqilka.
Varietal, loo doortay beeritaanka digriiga waa in si gooni ah loo kaydiyaa, 2 goor bishii, hubinta xaaladdeeda oo ay ka saarto miraha jilicsan ama dufan. Laga bilaabo 1 - 2 asbuuc ka hor inta aan lagu beerin karayn qolka dhalaalaya oo qafiif ah.
Wixii macluumaad ah ee ku saabsan meesha iyo sida loo kaydiyo digriiga diiray iyo haddii ay suurtogal tahay in la isticmaalo isticmaalka digriiga baradho qaboojiyaha, fiiri maqaalada kala duwan ee boggayaga internetka.
Inta badan cudurka kala duwan Zekura maaha mid cabsi leh, waa wax ka soo horjeeda wax kasta oo ku dhow. Cayayaanka waxay noqon karaan kuwo khatar ah: Baradhada Baradhada Baradhada, wireworm, aboorka, iyo Medvedka. Wireworm wuxuu ku abuuraa aagagga aan fiicnayn, ee digada iyo balka, waxay jecel yihiin cawska qamadiga.
Iska ilaali koritaanka cawska, marka ay dhacdo tiro badan oo cayayaanka ah ee ciidda, qabta dayrta dhoobada ciidda si ay u baabi'iso wireworm. Cayayaanka Tani waxay jecel yihiin in ay degaan carrada acidic, sidaa daraadeed, hababkan soo socda waxay ka caawiyaan sidii loola dagaalami lahaa:
Xaddidid (1 kg oo ah soodhaha la lulay 10 mitir oo laba jibbaaran)
Qoryaha geedaha (2 baaldi 10 litir ah 10 mitir oo laba jibbaaran oo carrada ah) ayaa ka caawin doona bacriminta dalka iyo ka takhalusi cayayaanka.
Si loola dagaallamo cayayaanka qaybta dhulka, waxaa jira daroogo badan, oo ay ku jiraan "Commodore", "Corado", bitobaxicillin. Waa in si adag loo dalbado si waafaqsan tilmaamaha ku xiran xirmooyinka kiimikada.
Daawooyinka suugaanta ah, daadinta dambaska, burka galleyda, iyo xitaa sibidhka ama boodhka (si taxadar leh) ayaa si wanaagsan loo dhisay.
Waxaa sidoo kale loo isticmaalaa buufinta infusions geedaha iyo infusions of walnut, acacia, caleemaha cufan, shag.
Ma jecel yihiin cayayaanka urta toonta, dixiriga, cawska, tubaakada, iyo geedo kale. On qorshe ah waa ku habboon beerto leh duurka ama, haddii aad doorbido, oo leh bouquets of toon, marigold, nasturtium, calendula, lafdhabarta. Tani waxay ka carari doontaa kuwa lamid ah iyo Medvedka.
Marxaladaha kala duwan ee baradhada kala duwan ee Zekura waxay u fiican tahay inay sii kordhaan dhulka ku yaala bartamaha Russia iyo Siberia. Awoodda looga hortagayo cudurrada iyo soo saarista wax-soo-saarka wanaagsan xitaa inta lagu jiro xilliyada abaarta waxay ka dhigeysaa mid caan ka ah dadka degaanka xagaaga iyo beerta.
Wax yar oo soo jiidasho leh waa in ay u adkaysato cagaha iyo si fudud u koraan. Digriiga qumman oo qurxoon oo leh huruudka jaalaha ah waxay leeyihiin dhadhan aad u fiican waxayna ku jiraan walxo badan oo faa'iido leh, si ay u dhammaystiraan cuntadaada.
Waxaan sidoo kale ku siinaynaa noocyo kale oo baradho leh shuruudo kala duwan:
Dhaqdhaqaaqa-dillaac Gaar ahaan hore Xilliga dhexe
Picasso Prince Black Blueness
Rocco Jacayl Ryabinushka
Slavyanka Rabbi ee isdhaafka Nevsky
Kiwi Ramos Dareemo
Asterix Lapot Milady
Nikulinsky Caprice Vektor Dolphin Svitanok Kiev Qaboojiyaha Sifra Jelly Ramona
Moobeyl dhirta miraha guga. Sidee loo gaari karaa goosashada qani ku ah?
Sida loo xiro albaabka: Birta (birta) iyo qoryaha
Ma suurtogal tahay in la siiyo rootiga ee cunto ah ee dhigista digaag
Waa maxay sababta ay xamaamyadu u dhaqdhaqaaqaan madaxooda markay socdaan
Macnaheedu waa inay la dagaallamaan infekshanka digaagga: Trisulfon, Eymeterm - isticmaal
Badeecaddu waa warshad geedka gabbaad leh oo soo qabta dhibbanayaasheeda iyadoo la adeegsanaayo dhibco dhajis ah oo caleemo ah, inkasta oo jaleecada hore ay u muuqato mid jilicsan oo aan dhib lahayn. Qaab dhismeedka dabagalaha dabka ayaa ah mid aan caadi ahayn. Kuwani waa madaxyada ishortaaga ah ee qaab wareeg ah oo lagu daboolay timaha kuwaas oo ah macsuumo dheefo qoyan oo jilicsan. Dabiicadani waxay dhajisaa qufuc oo soo jiidata cayayaanka. Read More
Pyrei Hortiisa: Isticmaalka daawada dhaqameed, faa'iido iyo waxyeelo
Sidee iyo waxa loo daaweeyo pochts turkey coccidiosis